महिलालाई कुन अंगमा छुँदा के हुन्छ ? जानिराख्नुस् अध्ययन यसो भन्छ « Online Tv Nepal
महिलालाई कुन अंगमा छुँदा के हुन्छ ? जानिराख्नुस् अध्ययन यसो भन्छ
Published :5June, 2018 4:55 pm
महिलाको सबैभन्दा संवेदनशील र छुँदा उत्तेजित अंगकाबारेमा हरेक पुरुष जिज्ञासु हुन्छन् । यही विषयमा गरिएको अध्ययन जर्नल अफ सेक्सुअल मेडिसिनमा प्रकाशित छ । निक्कै लामो अनुसन्धानपछि शोधकर्ताहरुले महिलाको शरीरका कुन अंगको संवेदनशीलता के भन्ने प्रश्नको विस्तृत जवाफ दिएका छन् ।
केही महिना अघि गरिएको उक्त अध्ययनले स्त्रीको शरीरमा कहाँ विस्तारै स्पर्ष गर्ने कहाँ जोडले थिच्ने र कहाँ कम्पन पैदा गर्दा उनीहरुलाई यौनिकरुपमा उत्तेजित पार्न सकिन्छ भन्ने तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।
त्यसैगरी यौन क्रिडाको समयमा भने स्त्रीको योनीको बाहिरी माथिल्लो भागमा हुने क्लिटोरिसमा कम्पन पैदा गर्नु सबैभन्दा उत्तम रहेको पाहियो । यौन क्रिडाका लागि स्त्रीलाई तयार पार्दा यी विधि निक्कै प्रभावकारी मानिएका छन् ।
क्यानडाको युनिभर्सिटी डु क्यूबेक ए मोन्ट्रियलका अध्यनकर्ताहरुको टोलीले १८ देखि ३५ वर्ष उमेरका ३० महिलामा लामो समय सम्म यो अध्ययन गरेको थियो ।
अध्यनकर्ताहरुले महिलाहरुलाई निर्वस्त्र पारेर टेवलमा सुत्न लगाएका थिए । र विभिन्न उपकरणको माध्यमबाट अंगहरुको स्पर्स परीक्षण गरिएको थियो ।